कम्लरीको सहकारीमा ठगी – Tharuwan.com
कम्लरीको सहकारीमा ठगी
May 28, 2019 June 7, 2019 admin
कम्लरीले स्थापना गरेका सहकारी संस्था लाखौं ठगी भएपछि डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दाङको लमहीमा स्थापित लावाजुनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था व्यवस्थापक गीता चौधरीले ७ लाख ७८ हजार २ सय १६ रुपैयाँ हिनामिना गरेपछि एक वर्षदेखि बन्द छ ।
चौधरीले रकम फिर्ता नगरेपछि सहकारीले उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । ०७३/०७४ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमै उनले उक्त रकम तिर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ । लामो समय प्रयास गर्दा पनि पैसा फिर्ता गर्न नसकेको सहकारीकी अध्यक्ष कृष्णा चौधरीले बताइन् ।
‘वडा प्रहरी कार्यालय लमहीमा दुईपटक निवेदन दियौं, जिल्ला प्रहरीमा पनि निवेदन दियौं तर केही सुनुवाइ भएन,’ उनले भनिन्, ‘एक वर्षदेखि सहकारी बन्द छ । ठगी गर्ने मान्छे काठमाडौंमा लुकेर बसेकी छन् ।’ २०६५ असोज ७ मा स्थापित लावाजुनी मुक्त कम्लरीको पहिलो सहकारी हो । यसमा ७ सय सदस्य छन् । भाडा तिर्न नसकेर सामानएउटा कोठामा राखिएको छ ।
अध्यक्ष चौधरीले सदस्यहरूले बचत गरेको रकम मागिरहेको बताइन् । ‘सदस्यहरूले पैसा फिर्ता मागिरहेका छन् । मेरो पसलमा आएर धेरैले झगडा गर्छन्, गाली गर्छन्, पसलका सामान उठाएर लैजान खोज्छन्,’ उनले भनिन्, ‘एक/दुई हजार भए पनि आफैं तिरेर मिलाऔं भन्न हुन्थ्यो । ठूलो रकम हिनामिना भयो । एक्लो प्रयासबाट सम्भव छैन ।’
लमही नगरपालिका ३ मजगाउँकी गीता पूर्वकम्लरी हुन् । उनी सहकारीको सदस्य हुँदै व्यवस्थापक भएकी थिइन् । राम्रो काम गरेकाले पदोन्नति गर्दै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका बेला उनले लाखौं रकम हिनामिना गरेको चौधरीले बताइन् ।
‘सदस्यहरूले बचत गरेको रकम कोषमा नराखेर आफैं खर्च गर्ने, बिनाकागजात ऋण निकालेर आफूले प्रयोग गर्ने गरेको पाइयो,’ उनले भनिन् । फोन स्वीच अफ गरेकाले गीतासँग सम्पर्क हुन सकेन । घोडाघोडी नगरपालिका १ सुखड कैलालीस्थित ओजरार डगर कृषि सहकारी संस्था पनि व्यवस्थापक तथा अध्यक्ष जुगिना चौधरीले ३ लाख ४६ हजार ५ सय रुपैयाँ हिनामिना गरेपछि सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ ।
२०७४/०७५ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा चौधरीले बिनानिर्णय र कागजात ऋण लगानी भनी उक्त रकम लिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा तत्काल उक्त रकम फिर्ता गरी संस्थालाई आर्थिक भारबाट बचाउन सुझाव दिइएको छ । २०६८ मा स्थापना भएकोसहकारीमा २ सय ४० सदस्य छन् ।
जुगिनाले सहकारीको व्यवस्थापक र अध्यक्ष हुँदा रकम हिनामिना गरेको हालकी अध्यक्ष रीता चौधरीले बताइन् । रकम फिर्ता गराउन पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसकेको उनले बताइन् । ‘अहिले नगरपालिकामा उजुरी दिएका छौं । नगरपालिकाले छलफलमा बोलाउँदा पनि उनी आएकी छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘हामीले बोलाउँदा पनि आएकी छैनन् ।’
जुगिनाले भने आफूले ठगी नगरेको दाबी गरिन् । ‘सहकारीमा पहिलेदेखि नै हिसाब बिग्रेको रैछ, अहिले मलाई दोष लगाएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘मैले राखेको ऐच्छिक बचतबाट केही रकम निकालेको हो । त्यो मेरो व्यक्तिगत रकम हो, सहकारीको रकम मैले हिनामिना गरेको छैन ।’
टीकापुर नगरपालिका ७ नारायणपुर बेलुवा कैलालीस्थित मिलन कृषि सहकारी संस्थाकी सदस्य सीता चौधरीले २ लाख ४९ हजार ९ सय रुपैयाँ ठगी गरेकी छन् । उनले समूहका सदस्यहरूलाई लगानी गरिएको घुम्ती कोषबाट फिर्ता भएको रकम र सदस्यहरूको बचत रकम हिनामिना गरेको स्वीकार गरेकी छन् ।
उनले २०७३ असार ३० गते तमसुक गरी १५ दिनभित्र उक्त रकम बुझाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएकी थिइन् तर असुली हुन सकेको छैन । २०६८ मा स्थापना भएको यस सहकारीमा १ सय ४७ सदस्य छन् । सीतालाई पटकपटक फोन गर्दा पनि उठाइनन् ।
सहकारी नै आयआर्जनको भर
मुक्त कम्लरीले सहकारीलाई नै आयआर्जनको मुख्य आधार बनाउँदै आएका छन् । धेरैजसो अभिभावकले आर्थिक अभावका कारण छोरीलाई कम्लरी पठाउने गरेको बताएपछि अरू थप बालिका कम्लरी बस्न नपरोस् भनेर मुक्त कम्लरीले सहकारीमा हात हालेका हुन् । सहकारी चलाउने सबै सदस्य फूर्वकम्लरी हुन् ।
मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका अनुसार मुत्त कम्लरी किशोरीले दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा ४२ वटा सहकारी र १५ वटा बचत समूह सञ्चालन गरेका छन् । दाङमा ८, बाँके ६, बर्दिया ९, कैलाली १२ र कञ्चनपुरमा ७ सहकारी छन् । जसमा ९ हजार ३ सय ९२ सदस्य छन् ।
पाँच जिल्लामा गरी सहकारीको कुल पुँजी ३ करोड ४२ लाख ६६ हजार १९ रुपैयाँ छ । मुक्त कम्लरी आफैंले जम्मा गरेको २ करोड ७९ लाख ९३ हजार ८ सय ७ रुपैयाँ छ भने नेपाल युथ फाउन्डेसनले घुम्ती कोषका लागि सहयोग गरेको ६३ लाख रुपैयाँ छ । हालसम्म १ हजार ९ सय २३ सदस्यमा २ करोड ९३ लाख ८१ हजार ७४ रुपैयाँ ऋण लगानी भएको छ ।
सहकारीबाट ८ सय ४८ मुक्त कम्लरीले ऋण लिएर विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका छन् । उनीहरूले बाख्रापालन, बंगुरपालन, तरकारी खेती, फ्रेस हाउस, किराना पसल, हार्डवेयर पसल, सिलाइकटाइजस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरेका छन् । सुरुमा मुक्त गरेर विभिन्न आयमूलक तालिम दिए पनि लगानी गर्ने रकम नहुँदा उनीहरू व्यवसायगर्नबाट वञ्चित भएका थिए ।
दुर्गालाल केसी/कान्तिपुरबाट साभार
3 8 देश
‘थारु आयोग’ थारु आन्दोलनकै उपज हो : अध्यक्ष चौधरी
तिक्कुर प्रणाली लागू भएपछि राजापुर क्षेत्रमा जोताहा किसान र जग्गाधनीबीच विवाद
टीकापुर सम्मेलन : सद्‍भावका लागि सरसफाइ र रक्तदान कार्यक्रम गरिने
टीकापुर सम्मेलनको सत्यता
थारु अतिथिलाई पहाडी समुदायले पानी खुवाएर, फूल दिएर स्वागत गर्ने
थरुहट थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी अन्तिम चरणमा
थारु पत्रकार संघ कपिलवस्तु शाखाको अध्यक्षमा श्याम सिटी
रेशम चौधरीको शब्द संगीतमा गुन्जिदैछ टीकापुर
थरुहट थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी तिव्र
थाकस कोरियाद्वारा जलेश्वरलाई सहयोग
टीकापुर घटना : कथनी एउटा,करनी अर्कै [विचार]
काे हुन् जातिवादी ? [विचार]
Kali Ram Tharu - चितवनको सौराहामा एकिकृत थरुहट राष्ट्रिय भेला
Nepal ko sambidhan ra sarkar ko byabhar herda tharu haru afno samudayako unnati chahane ho vane united hunuko bikalpa xain,grassroot level bat nai ekatako abhiyan suru garna khacho cha,tara k garne vanincha tharu kunai jat haina kinavane tharuharu lai afno jat vanne kura nai thaha hudaina..ani aruharukai kurama lagne grachan!! Zero unity so far!!
Surendra chaudhary - शान्ता चौधरीज्यू, तपाईँ कहिलेसम्म एमालेमा कमलरी बस्नुहुन्छ ?
Sanjay g good kura lekhnu vayako xa